အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Los Angeles မြို့, san Diego မှ, san Jose, ဆန်ဖရန်စစ္စကို, Fresno, Sacramento, ဆိုသူက Bakersfield, Modesto, စန်တာမာရီယာ, ကယ်လီဖိုးနီးယားလေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 877-626-9100 စီးပွားရေးအဘို့ငါ့ကိုအနီးအာကာသ deadhead ရှေ့ပြေးဗလာခြေထောက်အပေးအယူများအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့် destination သို့ get အကောင်းဆုံးကိုလေယာဉ်ပျံကုမ္ပဏီအကူအညီနဲ့အားဖြင့်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကြစို့ 877-626-9100 သငျသညျအနီးပိုပြီးတည်နေရာအတွက်.
သငျသညျကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီချက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏အချည်းနှီးသောပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထွက် Check.
Anaheim လင်းဒေးလ် Modesto san Diego မှ
ဆိုသူက Bakersfield Huntington Beach တွင် Oakland ဆန်ဖရန်စစ္စကို
Chula Vista က Irvine မြစ်ကမ်း san Jose
Fontana Oxnard Moreno ချိုင့် Pomona
ဥယျာဉ်တော် Grove ချို Cucamonga Oceanside စန်တာ Clarita
Fresno Los Angeles မြို့ စန်း Bernardino ဖွစျတဲ့စတော့ချ
ဆတ် Grove Corona အွန်တာရီယို စန်တာမာရီယာ
Los Angeles မြို့အနီးအနီးဆုံးပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းလေဆိပ်တည်နေရာများစာရင်း, san Diego မှ, san Jose, ဆန်ဖရန်စစ္စကို, Fresno, Sacramento, ဆိုသူက Bakersfield, Modesto, စန်တာမာရီယာ, , CA; သင်တို့အထဲ၌ပျံသန်းနိုင်သည် & သေးငယ်တဲ့ထံမှထွက်, အလယ်အလတ်, ကြီးမားသောပင်ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ်. ကျနော်တို့ကိုးကားလေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့်မည်သည့်အာကာသလေယာဉ်လေကြောင်းထမ်းဆောင်နိုင်, Hawker, လီယာ, သိမ်းငှက်, အန်တုသူ, Gulfstream, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကို, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးအတွက်ဘိုးအင်းစီးပွားရေးဂျက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်. မှာသင်၏နောက်ဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ငှားရမ်းစာအုပ်ဆိုင်မှအကောင့်အမှုဆောင်အရာရှိကိုခေါ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ 877-626-9100 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_California
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းအော်ရီဂွန် | ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား Los Angeles မြို့